Madaxweynaha Galmudug oo ka hadlay caqabadda ka haysata magacaabista Golaha Wasiirada | Saadaal Media
Madaxweynaha Galmudug oo ka hadlay caqabadda ka haysata magacaabista Golaha Wasiirada
Madaxweynaha Maamulka Galmudug, Axmed Ducaale Geelle (Xaaf), ayaa waxaa uu ka hadlay caqabadda xilligan ka hortaagan in uu soo magacaabo Golaha Wasiirada cusub ee maamulkiisa.
Tan iyo markii bishii May la soo doortay Madaxweynaha Galmudug, ayaa waxan jirin wax Wasiiro ah oo uu soo magacaabay, iyadoo mudadaasina ay shaqaynayen Golihii Wasiirada ee uu soo dhisay Madaxweynihii hore ee Galmudug, C/kariin Xuseen Guuleed.
Axmed Ducaale Geelle, Madaxweynaha Galmudug, ayaa sheegay inaanu iminka soo magacaabi karin Golihiisa Wasiirada, sababo ku aadan Maamulka Ahlu Sunna oo ay suggayan, si qaybtooda looga siiyo Wasiiro.
“Laba jeer Wasiirada ma dhisi karo. Maadaama Ahlu Sunna aan sugeyno ayaa waxaan rajeynaynay inaan la heshiino, Wasiirada qaybta ay ku leeyihiin aan ka siino, oo halmar aanu wax wada dhisno.” Ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug.
Madaxweynaha, ayaa xusay in mudadii uu fasaxa u haystay in uu ku soo dhiso Golihiisa Wasiirada ay uga hartay muddo gaaban, isagoona Ahlu Sunna ugu baaqay in ay furaan albaabada ay ka xirteen, si ay wada hadalada u soo cusbooneysiiyan.
“Fasax baan u qaadanay in halmar aan Wasiirada soo dhisno, mudadii hadda muddo gaaban baa noo hartay runtii, bar waa tagey. Hadana waxaan ka rajeynaya oo ka codsanaya inay sida ugu dhakhsaha badan albaabada naga furaan.” Ayuu yiri Madaxweyne Xaaf.
Xaaf oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee BBC, ayaa intaa ku daray “Albaab baa xiranee in albaabka naga furaan, oo aan isu tagno, isla-markaana aan wada hadal bilowno.”
Daba-yaaqadii bishii April, ayaa waxaa fashilmay dadaalo ay Dowladda Somaliya ku dooneysay in ay isugu soo dhaweyso Ahlu Sunna iyo Galmudug.